Awoowe 29 sano jir ah ka dib markii ay dhashay gabadhiisa oo 14 sano jir ah+Sawiro – SBC
Awoowe 29 sano jir ah ka dib markii ay dhashay gabadhiisa oo 14 sano jir ah+Sawiro
Posted by editor on July 16, 2011 Comments
Shem Davies oo 14 sano jir ku noqdey Aabe ayaa dariiqisii waxaan shakiba ka galin oo qaaday gabadhiisa ka dib markii ay ku dhashay da’da Aabaheed uu ku dhaley iyada oo aheyd 14 sano.
Tia oo 14 sano jir ah isla markaana ardey ah ayaa todobaadkan ku umushay gabar magaalada Bridgend ee Koonfurta gobolka Welsh ee wadanka Britain, waxaana sidaasi Shem uu ku noqdey Awoowihii ugu da’da yaraa ee soo mara taariikhda Britain.
Shem oo Tia hooyadeed Kelly ay kala tageen sadex bilood ka dib markii ay dhalatey ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in gabadhiisu ay ku dhasho da’daasi, laakiin Shem wuxuu ka qaracmay gabadhiisa Tia markii ay u sheegtey dhamaadkii sanadkii hore in ay uur u leedahay Jordan Williams oo 15 sano jir ahaa oo ay saaxiibo hore ahaayeen.
“Kuma qaylin karo gabadheyda, laakiin maxaan sameyn karaa, waan ogahay dhibka iyo culeyska ay leedahay in da’daasi ilmo lagu dhalo, waayo iyada ayaaba ah caruur, macnuhuna waa caruur caruur dhaley, anigu markii aan ku noqdey 14 sano jir ma awoodin inaan xanaaneeyo iyada, waana ka cararay laakiin xanaano ayay ka heshay hay’adaha social-ka” ayuu yiri Shem Davies.
Dhacdada gabdhaha yar yar uuraysanaya ayaa ka noqotey wadanka UK, xaalad xiligan si weyn isha loogu hayo iyadoo ay socdaan wacyigalin arinkan ku aadan oo warbaahinta, Iskoolada & goobaha la isagu yimaado laga wado, taasi oo lagu tilmaamay in wadanka UK uu kaalinta koowaad ka noqdey wadanka ugu horeeye ee gabdhaha 18 sano ka yar ee uurka qaadaya.
Warbixin maanta soo baxdey ayaa lagu sheegay in 40% ay sare u kaceen sanadkan gabdhaha yar yar ee uureysanaya, iyadoo sadexdii sano ee ugu dambeysay 100 milyan oo doolar ay kaga baxdo dawlada UK, barnaamijyada wacyigalinta ah ee gabdhaha yar yar ee uurka qaadaya, kuwaasi oo u badan Iskooley, guryaha waalidkood ku nool.